Falanqaynta Sonos Arc, maqalka dhawaaqa ugu dhameystiran suuqa | Wararka IPhone
Falanqaynta Sonos Arc, maqalka dhawaaqa ugu dhameystiran suuqa
Luis Padilla | 10/05/2021 14:51 | Apple tv, dhowr
Sonos wuxuu dhigay baarka aad u sarreeya oo leh Sonos Arc, bar dhawaaq ah oo loogu talagalay inay na siiso codka ugu fiican, Dolby Atmos, oo ay tahay inaan ku darno waxyaabo kale oo badan taasi waxay dhigeysaa iyada oo aan shaki ku jirin inay tahay barta ugu codka badan suuqa.
1 Sooc iyo qaabeynta
2 Xiriirka TV-ga
3 Dhawaqa shineemo ee gurigaaga
4 Amazon Alexa, Kaaliyaha Google iyo AirPlay 2
5 Muusikada ku jirta Sonos Arc
6 Fikirka Tafatiraha
Sooc iyo qaabeynta
Bar-dhawaaqeedu wuxuu leeyahay cabbirro waaweyn, dhererkiisuna yahay 114cm, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in la hor dhigo telefishannada waaweyn. Waxaa la dhigi karaa TV-ga hoostiisa, ama lagu dul nasan karaa miis, ama waxaa lagu dhejin karaa darbiga, taas oo ay tahay inaad u iibsato taageero dheeri ah oo aan ku jirin sanduuqa. Waxay leedahay wadar ahaan ku hadla 11 (3 tweeter, 8 woofers) iyo 11 kordhiyeyaal D ah. Kuwani ku hadla waxay ku jihaysan yihiin fikir ku saabsan soo saarista codka ugu fiican ee Dolby Atmos. Kani maahan bar-dhawaaqe "la moodo" ama in cusbooneysiinta barnaamijku ay siisay Dolby Atmos, laakiin si gaar ah loogu talagalay.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, waxay leedahay xiriir ethernet iyo WiFi (802.11b / g), marka lagu daro hal xiriir HDMI 2.0 oo la jaan qaadaya ARC iyo eARC (Waxaan ka hadli doonnaa xiriirkiisa TV-ga goor dambe). Haddii aad rabto inaad isticmaasho fiilada indhaha si aad ugu xirto codka, dhib malahan, maadaama adabtar uu ku jiro sanduuqa, laakiin waxaad waayi doontaa codka Dolby Atmos. Afarta makarafoonkeeda ayaa kuu oggolaanaya inaad siiso tilmaamo cod ah si aad u isticmaasho kaaliyeyaasha dalwaddii ee lagu rakibi karo: Kaaliyaha Google iyo Alexa. Ka sokow Dolby Atmos, waxay kaloo taageertaa Dolby TrueHD iyo qaabab kale oo badan oo caadi ah.
Naqshadeedu waa astaamo lagu garto guriga, oo leh murugo qalooca oo dusha ka saraysa dhammaan dusha Sonos Arc, oo ay dalooleen in ka badan 75.000 oo god oo kaliya astaanta Sonos ay jebinayso isku ekaanshaha dusha hore. Miyir, xarrago iyo waqti la'aan, sida dhammaan waxyaabaha Sonos. Marka lagu daro af-hayeenka madow ee aan ku arki karno falanqeyntan, waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaar ah inaan ku iibsanno midab cad. Qeybta hoose, laba cagood oo silikoon ah ayaa u oggolaanaya qabashada miiska wanaagsan, iskana ilaali gariirka, lagama maarmaanka u ah aaladda noocan ah.
Waxay leedahay LED yar oo ka koreeya astaanta Sonos, taas oo muujinaysa heerka isku xirnaanta, markaan u yeerno kaaliyaha dalwaddii, ama markii aan aamusnay sanqadha. Waxaan sidoo kale haysannaa seddex badhan oo taabasho ah si aan u xakameyno mugga iyo dib u soo celinta. Waxay sidoo kale leedahay badhanka taabashada ee dhinaca midig si loo joojiyo kaaliyaha dalwaddii, kaas oo ay la socoto laydh si loo ogaado xaaladdiisa. Xidhiidhadu waxay ku yaalliin dhabarka, oo ku xigta badhanka korontada. Faahfaahin muhiim ah: fiilada HDMI waxaa lagu soo daray sanduuqa, wax aan inta badan caadi aheyn.
Baarka Sonos Arc wuxuu ku xiraa TV-ga adoo isticmaalaya fiilo HDMI ah, oo ah inuu aado isku xirka HDMI ARC / eARC ee TV-gaaga. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan awoodi doonin inaad si toos ah ugu xirto wixii qalab ah baarka, laakiin halkii dhammaan dhawaaqyada ka soo baxaya TV-gaaga ay tagayaan Sonos Arc. Tani waxay leedahay faa iidooyinkeeda iyo qasaarooyinkeeda, in kastoo kiiskeyga aan naftayda si aad ah u qeexo anigoo ka door bidaya qodobbada wanaagsan ee doorashadan. Sababta ugu weyn ayaa ah inaadan ka walwalin waxa lagu soo saaro TV-gaaga, uma baahnid xarumo ama qalab kale maxaa yeelay waxaa kaa dhammaaday xiriirro isku habboon. Xitaa waad ka dhagaysan kartaa waxyaabaha DTT ka kooban dhexdeeda.
Laakiin sidoo kale waxay ka dhigan tahay in TV-gaagu noqon doono mid casri ah si loo isticmaalo. HDMI ARC dhibaato maahan, maxaa yeelay inta badan telefishannada ayaa ka mid ah, laakiin HDMI eARC waa, taas oo aan weli aheyn xiriir aad u baahsan. Iyada oo loo marayo HDMI ARC waxaad ku maqli kartaa dhawaq aad u fiican, laakiin maaha 100% dhab ahaan Dolby Atmos, kaliya wax aad isugu dhow oo dhawaqa runti fiican, laakiin aan dhab ahayn. HDMI eARC waxaad ku raaxeysan kartaa codka ugu fiican ee Sonos Arc uu na siin karo. Hubso in nooca isku xidhka ee telefishankaagu ka kooban yahay si aad u ogaato sida saxda ah tayada codka aad gaari karto.
Sida xakamaynta baarka dhawaaqa, waxaad isticmaali kartaa kontoroolka fog ee telefishankaaga, sidoo kale Siri fog ee Apple TV-gaaga. Uma baahnid inaad wax qabato, uma baahnid inaad wax uun dejiso, waxaad u baahan tahay inaad si fudud ugu xirto Sonos Arc telefishankaaga, oo aad u qaadatid kontoroolka fog ee aad si joogto ah u isticmaasho inuu awood u yeesho inuu kiciyo hoosna u dhigo mugga sanqadha dhawaaqa. Waxaa jira dib u dhac ugu yar oo ah dhowr tobnaad oo ilbiriqsi ah, waa wax gebi ahaanba sheeko-darro ah oo aan wax ka beddeleynin khibradda cajiibka ah ee adeegsiga qalabkan telefishankaaga.
Dhawaqa shineemo ee gurigaaga
Tayada codka Sonos Arc su'aal kama taagna, maxaa yeelay waa inay ku jirtaa maqal-dhamaadka sare. Waxaad ku raaxeysan doontaa dhammaan faahfaahinta dhawaqa filimadaada iyo taxanahaaga, oo leh baasas aad u wanaagsan iyo codad aad sifiican uga maqli karto xitaa goobaha ugu waaweyn. Tani waa wax ka soo ifbaxaya aaladaha kale ee la awoodi karo, xitaa iyadoo la adeegsanayo ikhtiyaarka isticmaalka laba HomePods oo ku xiran Apple TV-gaaga.. Dhawaaqa hareeraha ah ee aad ka heleyso oo keliya Sonos Arc runti wuu wanaagsan yahay, waana xulasho aad u fiican kuwa aan dooneynin inay qolkooda fadhiga ka buuxiyaan kuwa ku hadla.
Laga soo bilaabo codsiga Sonos ee iPhone-ka waxaan ka faa'iideysan karnaa xulashooyinka qaarkood si aan u hagaajino codka, ama halkii, aan ula qabsan lahayn xaalad kasta. Sonos Arc wuxuu leeyahay TruePlay, oo ah ikhtiyaar ku habboon codka si qolka aad ku jirto mahadnaqa isticmaalka makarafoonkaaga iPhone. Laakiin sidoo kale waxaad dhaqaajinkartaa laba ikhtiyaar oo aad uxiiso badan sida habka habeenka iyo wadahadalada la hagaajiyay. Midka ugu horreeya ee yareeya dhawaaqa codadka leh iyada oo aan hoos loo dhigin codka, iyo tan labaadna in wadahadalka la caddeeyo, oo ku habboon filimada waxqabadka.
Qaab-dhismeedka iyo ballaadhinta nidaamkaaga dhawaaqa waa wax lagu yaqaan Sonos, Sonos Arc-kaasina weli waa qodob muhiim u ah raalli ahaanshaha. Iyadu keligeed waxay na siisaa dhawaq cajaa'ib leh, laakiin haddii aad rabto waxaad ku dari kartaa laba dayax gacmeedyo si aad u ag dhigtid fadhiga, sida Sonos One, ama ku dar qalabka wax lagu baaso, sida Sonos Sub, si looga dhigo khibrada codka xitaa mid ka sii fiican. Iyo waxaas oo dhan si bilaa xadhig ah, adoo riixaya dhowr menus oo ku jira codsigaaga Sonos.
Amazon Alexa, Kaaliyaha Google iyo AirPlay 2
Isticmaalkiisa oo ah kaarka codka, waxaa sii dheer ikhtiyaarro kale oo kordhiya qiimaha aaladdan. Waxaan ka rakibi karnaa kaaliyeyaasha dalxiis ee Google ama Amazon, si aan ugu helno afhayeen caqli badan qolka aan ku nool nahay. Maxaad ku samayn kartaa kaaliyeyaashan? Waa hagaag, isla waxa aad ku sameyso qof kastoo caqli badan oo caqli-gal ah: dhageyso muusikada adeeggaaga socodka, xakameynta otomaatiga guriga, dhageyso podcast ama raadiyaha tooska ah, weydii macluumaad ku saabsan waxaad u baahan tahay ... Sidoo kale, shid TV-gaaga ama damin, oo xakamee mugga.
Iyo Siri? Hagaag, Siri laguma rakibi karo Sonos Arc, laakiin Haa, waad u soo diri kartaa waxyaabaha ku mahadsan iswaafajinta AirPlay 2. Taas macnaheedu waxa weeye in baarkani sanduuqa lagu dari doono arjigaaga Guriga, waxaadna Siri uga isticmaali kartaa qalab kasta oo leh (iPhone, iPad, HomePod…) si aad cod ugu dirto Sonos Arc. Waad isticmaali kartaa qolka badan, ama waxaad ku urursan kartaa kuwa kale ee ku hadla AirPlay oo muusiggu dhammaantood iskudhafan yahay.
Muusikada ku jirta Sonos Arc
Qaabkan Sonos Arc Looma isticmaali karo oo kaliya in lagu dhagaysto nuxurka telefishankaaga, laakiin sidoo kale in lagu dhagaysto muusikada adeegsiga adeeg kasta oo aad isticmaasho. Apple Music, mahadsanid xaqiiqda ah inay kujirto Amazon Alexa ama loo marayo AirPlay 2, Spotify ama mid kasta oo ka mid ah adeegyada muusikada qulqulaya ee ku jira barnaamijka Sonos iyo inaad adigu xakameyn kartid dalabka laftiisa.
Tayada muusikada ee loo yaqaan 'Sonos Arc' waa mid aad u fiican, inkasta oo laga yaabo inaysan ka duwanaan kala duwanaanshaha kuwa kale ee ku hadla dhamaadka sare sida markaan dhageysano filimada ama taxanaha. Laba HomePods oo rikoodh ah ayaa ku bixin kara dhawaq aad u la mid ah kan Sonos Arc, taas oo aan wax taban ahayn, waa wax iska soo horjeedda.. Sonos Arc wuxuu soo bandhigaa heer sare markay timaado shaleemo, waana mid heer sare ah markay tahay muusikada.
Iyadoo la adeegsanayo Dolby Atmos, iswaafajinta AirPlay 2, suurtagalnimada adeegsiga Alexa ama Google Assistant, iyo qaabka iyo fursadaha ballaarinta ee Sonos ay ku bixiso dadka ku hadla, Sonos Arc shaki kuma jiro inuu yahay kan ugu dhameystiran uguna xiisaha badan ee aad ka heli karto. suuqa. Qiimihiisu wuxuu umuuqan karaa mid sareeya, laakiin hadaan isbarbar dhigno baararka kale ee dhawaaqa ee bixiya Dolby Atmos, waxay noola muuqan doontaa mid raqiis ah, iyo inagoon xisaabin astaamaha kale ee yar (ama aan midkoodna) na siinin Waxaan ku iibsan karnaa € 899 on Amazon (isku xirka).
Ku dhejiyay: May 10 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 10 ee 2021
Alexa iyo Kaaliyaha Google
Dolby Atmos iyo Dolby TrueHD
Fiilooyinka HDMI iyo adabtarada indhaha ayaa lagu daray
Suurtagalnimada fidinta alaabada kale ee Sonos
La jaan qaada AirPlay 2
Subwoofer kuma jiraan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Falanqaynta Sonos Arc, maqalka dhawaaqa ugu dhameystiran suuqa
CARROT Cimilada waxay heshaa qaybo cusub iyo qaabab loo qaabeeyo
Sida loo dhaqaajiyo iyo maxay tahay aqoonsiga dhawaaqa iPhone